ဂရိတ် Shape အတွက်သင့်ရဲ့ဥယျာဉ် Tools များသိမ်းဆည်းထားပါရန်ကဘယ်လို - တရုတ် Richina
ဂရိတ် Shape အတွက်သင့်ရဲ့ဥယျာဉ် Tools များ Keep လုပ်နည်း
ဥယျာဉ်တော်မှ Love? ဤသည်နေ့ရက်ကာလဒီတော့ပေါ်ပြူလာ gardening နှင့်အတူအထဲတွင်ကြီးထွားလာတစ်ခုခုနှင့်အတူအနည်းဆုံး patch ကို, အိုး, ဒါမှမဟုတ်ကွန်တိန်နာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းအများအပြားအိမ်နောက်ဖေးရှိနေကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, သင်သည်သင်၏အပင်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးပေးဆောင်နေနှင့်မသိပ်သင်သည်ထိုသူတို့ကြီးထွားဖို့အသုံးပြုတဲ့ tools တွေကိုရန်။ Trowels, hoes, လူတွေနှင့်ရေမှုတ်များကြီးထွားလာရာသီကာလအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုတွေအများကြီးယူ, သင်ကသူတို့ကိုချစ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လျှင်, သူတို့သည်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့မဟုတ်တော့ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားရှိဥယျာဉ်ဂီယာအကြောင်းပြောဆိုခြင်းမပြုမီအရည်အသွေးမြင့် tools တွေကိုပိုမိုသုံးစွဲရေရှည်မှာ၌သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ငွေကယ်တင်မည်အသစ်ဥယျာဉ် Tools များဝယ်ယူသောအခါသတိရပါ။ အစားဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့်မကြာခဏအစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစျေးပေါ tools တွေထက်ကြာရှည်လိမ့်မယ်တဲ့ tool တစ်ခုအတွက်နည်းနည်းအပိုပေးဆောင်။ ပြီးတော့သင့်လျော်စွာသူတို့ကိုအသုံးချ! စကားကိုတတ်သကဲ့သို့သငျတိုအားလုံးတစ်ဦးရိုက်နှက်သောသံတူသည်အခါ, အရာအားလုံးကိုတစ်ဦးတူလက်သည်း-ဒါပေမယ့်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုများအတွက် tool ကိုသုံးပြီးပျက်စီးစေသို့မဟုတ်ခြိုးဖောကျသူက (နှင့်ပင်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်စေ) တစ်ဦးအမြန်လမ်းဖြစ်ပါသည် ။ တစ်ဦးကရှည်လျား-ကိုင်တွယ်ဂေါ်ပြားပုဆိန်၏နောက်ကျောတစ်ပျဉ်တူမရှိ, လက် pruner တစ်လက်မအရွယ်နျဌာနခှဲတစျဆငျ့ကိုမြင်လျှင်ဖို့ဒီဇိုင်းသည်မဟုတ်, တစ်ဦး crowbar မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ tools တွေကိုသင့်ရဲ့လက်ရှိ stash အထိမဖြစ်အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, (အထူး tools တွေကိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးဖြေရှင်းချက်သင်မကြာခဏမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်), သင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှချေး, ဒါမှမဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အဘို့အဦးတည်းငှားရမ်းစဉ်းစားပါ။
သငျသညျကောင်းသောဥယျာဉ် Tools များအစုတခုရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့6လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများသိုလှောင်မှုနဲ့အတူစတင်များမှာ!
အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးနောက် tool များ၏အရေအတွက်သည်တဦးတည်းရန်သူဒြပ်စင်မှထိတွေ့မှုကြောင့်တစ်ဦးကသွန်းတဲ့ tool ကိုဖွင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်မနက်ဖြန် (သို့မဟုတ်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း) သူတို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာလုပ် don`t, သင့် tools တွေကိုစွန့်ခွာရန်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်သွေးဆောင်! ဥယျာဉ်တော်၌တခုသွန်း, ကားဂိုဒေါင်, ဒါမှမဟုတ်ပင် weatherproof tool ကိုသိုလှောင်မှုယူနစ်ထွက်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ tools တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်း (ကကျေးလက်စာတိုက်ပုံးလက် tools တွေကိုအဘို့ကြီးစွာသော weatherproof stash စေသည်), နှင့်သူတို့အတွက်အချိန်ထွက်ဖြုန်းကြောင်း tools တွေထက်အဆများစွာပိုရှည်ကြာရှည်ဦးမည် နေရောင်, မိုးရွာရွာ, နှင့်လေ (သို့မဟုတ်အရပ်ရှည်ရှည်မြက်ထဲမှာဝှက်ထားရပြီးတော့ကျော် run ရ) ။
အဆောက်အဦးအပြင်သိုလှောင်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, အက်ကွဲ, အုပ်စုခွဲ, အတိုင်နှင့်ပုပ် roughen နိုင်သည့်သစ်သားလက်ကိုင်များအတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစံပြ tool ကို-သိုလှောင်မှုဧရိယာရာသီဥတုမှသင်၏ tools တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်ပေမယ့် tools တွေကိုခန်းခြောက်နိုင်ပြီးသံချေးများနှင့်အနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီထက်များပါတယ်ဒါကြောင့်, လေစောင်ရေများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မြေဆီလွှာတွင်အစိုဓာတ်ကိုရရှိထားသူများနှင့်သံချေးအားပေး, ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းတဲ့သင့်ရဲ့ tools တွေကိုပယ်ရှားသူတို့ကိုကြာကြာနောက်ဆုံးမှကူညီပေးပါမည်။ ဒါကလည်းအရပ်မှအရပ်မှပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းမှပေါင်းပင်အမြစ်များနှင့်အစေ့သို့မဟုတ်မြေ-ဘွားရောဂါ-bits ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းပါပဲ။ သင်သည်သင်၏ tools တွေကိုပယ်ရှားခြင်းမပြုမီ, (သင့် tool ကိုသိုလှောငျဒေသများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဦးတည်းကိုစောင့်ရှောက်) ဆိုသည်မြေဆီလွှာကိုချွတ်ဆေးကြောပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး PuTTY ဓါးနှင့်အတူကပယ်ကိုခြစ်။ (လိုအပ်ပါကအနည်းငယ် turpentine နှင့်အတူ) tools တွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမှစက်ရုံရည်နှင့် resins ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းကိုသုံးပါ။ တစ်စုပ်အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့်တကွ, သန့်ရှင်းကိရိယာများ, အထူးသဖြင့်မည်သည့်သတ္တုနှင့်သစ်သားအစိတ်အပိုင်းအခြောက်။
သငျသညျသိသာတဲ့အနာရောဂါစွဲစက်ရုံပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြလျှင်, tools တွေနဲ့ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်မတိုင်မီမည်သည့်ပိုးမွှားပယ်သတ်ပစ်ရန်ငါးမိနစ်အဘို့အရက်နှင့်တစ်ဝက်ရေပွတ်နယ်ဝက်၏အဖြေတစ်ခုအတွက်သင့်ရဲ့သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများစုပ်ယူထားသည်။
သူတို့ကို Sharp က Make
အများစုကအကောင်းတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးတစ်ဦးချွန်ထက်သောဓါး၏တန်ဖိုးကိုသိကြပေမယ့်မည်မျှဥယျာဉ်မှူးချွန်ထက် tools တွေကိုပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုမိုမြန်ဆန်ဥယျာဉ်တာဝန်များကိုစေနှင့်အပင်များအတွက်အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်ပိုကောင်းသည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်? တစ်ပေါက်ပြားသို့မဟုတ်လက် pruner အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးအစွန်း Keeping လွယ်ကူသည်နှင့်ရေရှည်တွင်သင်သည်အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ tool ကိုမှိုင်းသည်အထိစောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့: သင်၏ tools တွေကိုအဘို့မဝင်အဖြစ်နေ့စဉ်သွေး၏စဉ်းစားကြည့်ပါ
အဆိုပါဓါး၏အစွန်းမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ အတော်များများက tools တွေကိုပြောင်းပြန်ဘက်မှာတစ်ဖက်နှင့် (beveled) စောင်းနေသောအပေါ်ပြား ဖြစ်. , သည်အခြား tools တွေနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးတွင် angled နေကြသည်။ ထို့အပြင်၏ထောင့်ကိုစောင့်ရှောက်မည် "ဘီဗဲလ်။ " သူကတစ်ဦးဓါးများကဲ့သို့ချွန်ထက်နှင့်ပါးလွှာ Is သို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုတုံးထောင့်မှာသွေးရုံအလွန်အစွန်းပါသလဲ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မူလဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ။
သူတို့ကကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်သည့်သံမဏိ၏ဖန်ဆင်းနေမဟုတ်လျှင်အများစုကသတ္တုကိရိယာများ, သံချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ရေနံတစ်ပါးလွှာအပေါ်ယံပိုင်းကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ ပျော့ပျောင်းအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့်အတူသွန်းလောင်းသင့်ရဲ့ tool ကိုအတွက် linseed ဆီတလုပ်နိုင်တဲ့တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပယ်ရှားရှေ့၌သင်တို့သန့်စင်ကိရိယာတွေကိုအမြန်တခါ-ကျော်ပေး။ သင့်ရဲ့ tools များအပေါ်မော်တာရေနံကိုသုံးပါ don`t ကျေးဇူးပြု. ! ထိုဥယျာဉ်ကိုစာအုပ်တွေအများကြီးပါသေးကအကြံပြုပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်တော်သည်မြေဆီလွှာသို့မော်တာရေနံချပြီးခံရဖို့လိုသလဲ ငါဆက်ဆက် don`t ။
သင်သည်မည်သည့်သံချေးတွေ့ပါကဖယ်ရှားပစ်ရန် (မျိုးတစ်လက်သည်းဖိုင်နဲ့တူမယ့်အစားကတ်ထူပြားများအထည်မှလျှက်ရှိကြောင်းနှင့်သတ္တုထည်လုပ်ငန်းကအသုံးပြု) တစ်ဝါယာကြိုးဖြီးသို့မဟုတ် emery အထည်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်တို့သည်လည်းအဆီပြန်သဲနှင့်အတူကကွာပွတ်သပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အရိပ်ထဲတွင်ရေနံနှင့်အတူစိုစွတ်ကြ၏သဲအပြည့်အဝမယ့်ကြံ့ခိုင်ပုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ရုံသဲသို့အနည်းငယ်ဆသန့်ရှင်း tool ကိုထိုး။ ဒါကအများအားဖြင့်ကတစ်ချိန်တည်းမှာအရောင်နှင့်ရေနံသင့်ရဲ့ tools တွေနှစ်ဦးစလုံးမှကြာအားလုံးပါပဲ။
အခါအားလျော်စွာအခြောက်မှ linseed ရေနံတစ်ပါးလွှာအပေါ်ယံပိုင်း, unpainted သစ်သားလက်ကိုင်လျှောက်ထားပြီးသန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနောက်နေ့နှင့်အတူမည်သည့်ပိုလျှံပယ်ရိုက်ကူးခြင်း။ တစ်ဦးကဆိုးဆိုးရွားရွားလက်ကိုင်ဆီအတော်လေးနည်းနည်းတက်စိမ်, ဒါကြောင့်အောက်ပါနေ့ရက်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ left အနည်းငယ်ရေနံလည်းမရှိသည်အထိနေ့စဉ်ပါးလွှာအပေါ်ယံပိုင်း add ပါလိမ့်မယ်ရာသီဥတု။ သငျသညျ, ဒေသခံတစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာသင့်ဒေသခံကသဘာဝအစားအစာစတိုးဆိုင်မှဦးခေါင်း linseed ရေနံကိုမတှေ့နိုငျပါ။ သင်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ကြောင်း Flaxseed ရေနံကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ "lin" "ပိတ်ချော," ပိုက်ဆန်ကနေဖန်ဆင်းဖိုင်ဘာ oil- linseed ကဲ့သို့တူညီသောအရာဖြစ်၏။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦးကိုချွတ်အရသာတီထွင်ထားပြီးသင့်မီးဖိုချောင်အတွက်မဆိုအဟောင်း flaxseed ရေနံတက်သုံးစွဲဖို့ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။